क्लियरस्पेस -१ मिशन अन्तरिक्ष मलबे मा पंज गर्न - Micro-Semiconductor.com
क्लियरस्पेस -१ मिशन अन्तरिक्ष मलबे मा पंज गर्न
२०२25 को लागि योजना गरिएको, क्लीयरस्पेस -१ उपग्रहले यसको लक्षित वस्तु स collect्कलन गर्न पिन्सर गति प्रयोग गर्दछ, यसलाई पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुन: कन्ट्रोलले प्रवेश दिनु अघि। र Elennor DEIMOS एटिट्यूड र कक्षा नियन्त्रण प्रणाली (AOCS) डिजाइन गर्दछ। यसले दिशातिर गर्नेछ र उपग्रह स्थानको जंक समात्न मद्दत गर्दछ, उर्जा शक्ति जेनरेटर, थ्रस्टर र एन्टेना प्रयोग गरेर।
"क्लियर्स स्पेस १ १ युरोपमा प्रमुख मार्गनिर्देशन, नेभिगेसन र कन्ट्रोल सिस्टम प्रदायकको रूपमा हाम्रो भूमिकाको पुष्टि हो," इलेक्नोर डेइमोस ग्रुपका सीईओ इस्माइल लोपेजले भने।
"यो एक धेरै नवीन मिशन हो र हामी उत्साहित छौं कि हाम्रो कम्पनीहरुमा विशेषज्ञता र क्षमता आवश्यक टेक्नोलोजी चुनौतीसँग मेल खान्छ।"
क्लियरस्पेस मिसन अवधारणा एक बर्ष पहिले यूरोपीयन अन्तरिक्ष एजेन्सी द्वारा अनुमोदन पछि, क्लीयरस्पेस - रोबोटिक्स मा विशेषज्ञता संग एक स्विस स्टार्ट-अप मिसन को समन्वय गर्न थाले। यो युके मा Elecnor DEIMOS सहित विशेषज्ञता संगठित, युके अन्तरिक्ष एजेन्सी हाइलाइट भयो।
Elecnor DEIMOS यूके को एटिट्यूड र कन्ट्रोल प्रणाली समग्र उपग्रह 'autopilot' मा एकीकृत हुनेछ। मार्गनिर्देशन, नेभिगेसन र नियन्त्रण प्रणाली पोर्चुगलमा एलेक्नोर डेइमोस द्वारा विकसित गरिएको छ र अन्य जर्मन र पोर्तुगाली संस्थाहरूसँगै। यस संघले असेंब्लीमा क्लीयरस्पेसलाई टेवा दिन र मिशनको अपरेशनको लागि टेस्ट पनि गर्नेछ।
"१teen बिलियन बर्षसम्म - बिग बै Bang र १ 195 77 को शरद betweenतु बीच - ठाउँ नै प्रामाणिक थियो," युके स्पेस एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी डा। ग्राहम टर्नकले भने। तर त्यो शरद sinceतुदेखि हामीले लगभग १०,००० उपग्रह आकाशमा राखेका छौं, जस मध्ये अधिकांशले अहिले असफल वा नष्ट गरिसकेका छन।
“बेलायतले यो खतरनाक मलबेनलाई ट्र्याक गर्न र हटाउनको लागि अग्रसर गर्दछ, र म खुसी छु कि यस अग्रगामी महत्वाकांक्षालाई सहयोग गर्ने टेक्नोलोजी बेलायतमा बनिएको छ। २०१ 2018 मा, पृथ्वीको 300०० कि.मी. माथि, एक ब्रिटिश उपग्रह - हटाईडीआरआईबीआईएस द्वारा संचालित - सफलतापूर्वक कक्षामा एक जाल सफलतापूर्वक भत्काइयो कसरी अन्तरिक्ष मलबेलाई कब्जा गर्ने प्रदर्शन गर्न। उपग्रहले पठाएको सानो वस्तु प्रयोग गरेर प्रदर्शनले अन्तरिक्ष जंक खाली गर्न प्रविधिको परीक्षण गर्ने अभियानको एक हिस्सा खडा ग .्यो। ”
सरे स्पेस सेन्टरको हटाउने DEBRIS उपग्रह जाल हेर्नुहोस्
हटाइएको डीआरआईबीआईएस उपग्रह भनेको सरे युनिभर्सिटीमा सरे स्पेस सेन्टरको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिक्ष कम्पनीहरु र अनुसन्धान संस्थाहरूको कन्सोर्टियमको निर्माण थियो।
क्लीयरस्पेस -१ लक्ष्य
लक्ष्य वस्तु के हो? क्लियर्सपेस १ अभियानको उद्देश्य VESPA अप्पर पार्ट (ट्र्याकिंग: www.n2yo.com/satellite/?s=39162) को कक्षाबाट हटाउनु हो जुन मे २०१ in मा VEGA उडान VV02 मार्फत प्रोबा वी उपग्रह बोक्ने सुरुवात गरिएको थियो।
VESPA माथिल्लो भाग र "सानो स्याटेलाइट इन्टरफेस संरचना" जसले प्रोबा V ले प्रोबाको बिछोड भए पछि संलग्न रह्यो, एलेक्नोर डेइमोस रिपोर्ट गर्छ।
भर्खरै युरोपियन अन्तरिक्ष एजेन्सीले अन्तरिक्ष मलबेको बढ्दो समस्यालाई प्रकाश पार्‍यो। विशेष रूपमा, कि कक्षामा उपग्रह संख्या स्याटेलाइट ब्रॉडब्यान्डको लागि 'मेगा-तारामंडलहरू' को प्रक्षेपणको साथ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ।
यी नक्षत्रहरूले हजारौं उपग्रहहरू समावेश गर्न सक्दछ, टक्करको जोखिम र यसरी थप ठाउँ भत्काइ बढ्छ।
"अन्तरिक्षमा केवल एक टक्कर वा विस्फोटले हजारौं साना, द्रुत गतिले भरेका मलबेको सानो शार्डहरू सिर्जना गर्दछ जुन कार्यरत उपग्रहलाई नोक्सान गर्न वा नष्ट गर्न सक्षम छ," ईएसएले भन्यो। "उदाहरणका लागि, २०० 2007 मा, फेenयुन -१ सी उपग्रहको जानाजानी विनाशले लगभग 800०० किलोमिटर उचाइमा मलबेको मात्रा दोगुना गर्‍यो, जुन त्यस समयमा मलबेको कुल जनसंख्यामा %०% वृद्धि भयो।"
शरद Earlierतुमा, बेलायतको अन्तरिक्ष एजेन्सीले अन्तरिक्ष मलबे समाधान गर्न परियोजनाहरूको लागि रकम घोषणा गर्‍यो। अन्तरिक्षमा मलबेहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्न युकेका सात कम्पनीहरूलाई १ मिलियन डलर कोष प्रदान गरिएको थियो।
एजेन्सीको अनुमान छ कि हाल कक्षामा १ 160 करोड वस्तुहरू छन् - मुख्यतया मलबे - जुन हामीले दिनदिनै प्रयोग गर्ने सेवा प्रदान गर्ने उपग्रहसँग टकराउन सक्छ।
सात प्रोजेक्टहरूले सेन्सर टेक्नोलोजी विकास गर्नेछ - वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता - खतरनाक अन्तरिक्ष मलबे अनुगमन गर्न। ती हुन्: लुमी स्पेस, डेइमोस, लिफ्ट मी अफ, डी-ओर्बिट, फुजिट्सु, एनओआरएसएस र एन्डोर।
छवि: ClearSpace - ClearSpace-1 मिशन
पनि हेर्नुहोस्: एस्ट्रोस्केलले स्पेस मलबे हटाउन को लागी 1 १ m १ को रकम उठाउँदछ